माओवादीका प्रदेश प्रमुखले एमालेका मुख्यमन्त्रीलाई सघाएपछि…
वैशाख २, काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) र राष्ट्रिय जनमोर्चाले समर्थन फिर्ता लिएसँगै गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको सरकार स्पष्ट रुपमै अल्पमतमा परेको थियो । नेकपा (एमाले)भित्रको आन्तरिक किचलो र माओवादी र जनमोर्चाको समर्थन फिर्तासँगै गुरुङको सत्ता जोगिने अवस्था थिएन । तर, गुरुङले भीरको डिलमा झुण्डिन पुगेको सत्तालाई प्रदेश प्रमुखको सहायतले तत्कालका लागि जोगाएका छन् ।
बिहिबार आफुँविरुद्व अविश्वासको प्रस्ताव आउने स्पष्ट भएसँगै उनले प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनको सहयोगमा प्रदेश सभा अधिवेशनको अन्त्य गराउँदै सरकार जोगाएका हुन् । अधिवेशन अन्त्यसँगै तत्कालका लागि गुरुङको सत्ता जोगिएको छ ।
अधिवेशन अन्त्य नै संशयमा
मुख्यमन्त्री गुरुङले बुधबारसम्म पनि आफुँविरुद्व अविश्वासको प्रस्ताव आए सहज रुपमै सामना गर्ने बताएका थिए । उनले लोकतान्त्रिक परिपाटीमा सबै कुरा सम्भव हुने पनि बताएका थिए ।
तर, अविश्वासको प्रस्ताव दर्ताको लागि विपक्षी दलहरुबीच तयारी भईरहेका बेला बिहिबार अचानक बुधबारको मितिमा प्रदेश सभा अधिवेशन अन्त्यको सूचनाले सशंय पैदा गराएको छ । साथै अधिवेशन अन्त्य गराएका प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचन सम्पर्क विहिन हुनुले प्रश्न पनि उब्जाएका छन् ।
अनौठो त, माओवादी केन्द्रबाट प्रदेश प्रमुख बनेका शेरचनले एमालेको सत्ता जोगाउन रातारात किन सहयोग गरे ? किन बिहिबार बिहानसम्म पनि विपक्षी दलहरुले अधिवेशन अन्त्यको सूचना पाएनन् ? धेरैले अधिवेशन अन्त्यको झटपट निकालिएको सूचनालाई नै सशंयका रुपमा हेरेका छन् ।
जोगिने अवस्थामा थिएन गुरुङको सरकार
६० सदस्यीय प्रदेश सभामा नेकपा (एमाले)का २७ सांसद थिए । १३ सांसद रहेको माओवादी केन्द्र र तीन सांसद रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाले समर्थन फिर्ता लिएसँगै एमाले स्वतः अल्पमतमा पुगेको थियो ।
समर्थन फिर्तासँगै माओवादी केन्द्रले १५ सांसद भएको नेपाली कांग्रेसलाई सत्ता निर्माणमा सहयोग गर्ने निर्णय गरेको थियो । कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा र जनमोर्चाको समिकरणसँगै सत्ता निर्माणका लागि आवश्यक बहुमत स्पष्ट बनेको थियो । विपक्षी दलहरुबीच समिकरणसँगै अल्पमतमा पुगेको एमाले सरकार जोगिने कुनै सम्भावना थिए ।
स्मरणरहोस् एमाले आफैं विभाजित छ । जहाँ माधव कुमार नेपाल पक्षका सांसदहरु मुख्यमन्त्री गुरुङलाई सहयोग गर्ने पक्षमा छैनन् ।
अविश्वासको प्रस्ताव छल्न मुख्यमन्त्री गुरुङले मध्यरातमै गरे प्रदेशसभा अधिवेशनको अन्त्य